Shiinaha-soosaarayaasha boorsada Laptop Customized, Alaab-qeybiyeyaasha, Warshad
Hoyga > Boorsooyin > Boorsada kumbuyuutarka > Shandada Laptop-ka
Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2003. Ganacsigeena ugu weyni waa nashqadeynta, soosaarka iyo iibinta alaabada boorsada, sida: boorsooyinka laptop-ka, boorsooyinka iskuulka ardayda, boorsooyinka iskuulka, bacda xafaayada, boorsooyinka dibada, boorsooyinka isboortiga, rucks, boorsooyinka garabka iyo alaabooyin kale. Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale ballaarineynaa ganacsiyada kale, sida Naqshadeynta iyo soo-saarista: bacaha suunka, boorsooyinka duffel, boorsooyinka gacanta, boorsooyinka qalabka, boorsooyinka qadada, boorsooyinka qoryaha, boorsooyinka taatikada militariga, boorsooyinka xayawaanka iyo waxyaabaha kale. Si loo daboolo baahiyaha shaqsiyeed ee macaamiisha, waxaan sidoo kale dhisnay waax ka caawisa macaamiisha inay helaan qaybaha kale ee badeecadaha ee Shiinaha. Shiinaha dhexdiisa, waxaan leenahay silsilad xoog leh oo qaan gaar ah oo kor u kacsan iyo silsilad saadka oo hoos mara Tani waa faa'iidadayada ugu muhiimsan. Faa'iidadan awgeed, waxaan ugu adeegi karnaa dhammaan macaamiisheenna si dhakhso leh, ka wanaagsan oo ka wanaagsan, oo waxaan u siin karnaa macaamiisheenna adeegyo wax-soo-saar tayo sare leh oo tayo sare leh, waxaan sidoo kale macaamiisha ku siin karnaa badeecooyinkeena noocyada asalka ah oo tayo sare leh. Shaqaalaheena 600 iyo 500 mashiinada wax soo saarka ayaa ah hantida ugu weyn. Sideen u ilaashan karnaa booskeena hogaaminta? Waxaan mudnaan siineynaa isku xirka dadka, waxaana muhiimada koowaad siineynaa ilaalinta xuquuqda aadanaha ee shaqaalaha iyo ilaalinta xuquuqda macaamiisha. Aqoon isweydaarsiga 18,000 mitir murabac ah wuxuu noo ogolaanayaa inaan meel dhigno qalab wax soo saar iyo shaqaale wax soo saar badan, isla markaana aan u siino macaamiisha adeegyo ka imaado naqshadeynta wax soo saarka, soosaarka muunada, soosaarka tirada badan, saadka xamuulka, iyo bayaanka kastamka. Haddii aad u baahato inaad habeyso alaabada boorsada ama aad metesho astaanteena, fadlan nala soo xiriir: (ku qor halkan emailka shirkadda, guji si aad wax uga beddesho emaylka)
1. Shandada Laptop-ka product introduction:
(1) Dharka kore ee shandada laptop-ka wuxuu ka sameysan yahay 1680D nylon Oxford maro. Maadadani waxay leedahay xoog silibis adag iyo adkeysi abrasion. Cufnaanta sare ee dharka iyo dahaadhka biyaha celiya ayaa si wax ku ool ah uga hortagi kara roobka inuu ku dhex rido bacda. , Isku-dhafkan wuxuu leeyahay waxqabad wanaagsan oo aan biyuhu lahayn, wuxuuna leeyahay dhalaal sharaf leh. Waxqabadka biyuhu wuxuu gaari karaa: IPX3 ama IPX4.
(5) Shandadeena laptop-ka waa mid neefsan kara, xiranna u adkeysanaya, biyuhu diidi karaan oo culeyska yareyn karaan. Waxay hanan kartaa laptop 15.6-inji ah iyo qalabka durugsan.
(6) Shandadeena laptop-ka waxaa la furi karaa oo la xiri karaa 180 °. Naqshaddani waxay ka caawin kartaa dadka isticmaala si dhakhso leh oo fudud si ay u helaan walxaha. Waxaan sidoo kale u qaabeynay bac gudaha ah Ipad.
2. Xaddidaadaha alaabada (qeexitaanada) shandadaha laptop-ka
Dhererka 32cmX Width 12cmX Dhererka 47cm
Oo ay ku jiraan laptops iyo kiniinno ka hooseeya cabbirka 15.6-inji
3. Astaamaha iyo codsiyada alaabada boorsada laptop-ka
(1) Boorsadan laptop-ka ah waxay leedahay astaamaha biyuhu, yareynta culeyska, nuugista shoogga, iska caabbinta, nolosha muddada dheer, shaqeynta badan, iwm.
(2) Waxaad u adeegsan kartaa boorsadan laptop-ka ah si aad si fudud ugu keydiso laptop-kaaga shaqada iyo qalabka durugsan, sida kiiboodhka, jiirka, U diskiga, moobilka moobaylka, iwm inta lagu jiro shaqada, safarka, safarka ganacsiga iyo waqtiga firaaqada
5. Shandada Laptop-ka packaging and delivery
J: <= 1000USD, 100% bixinta kahor> = 1000USD, 30% T / T kahor, 70% D / P shixnad.
(2) Wareegga oraahda dufcaddu waa 2-3 maalmood oo shaqo. Hal shey ayaa la soo xigtay 12 saac
(3) Qaabka xigashada: sicirkii hore ee warshadda, FOB, CI.
Calaamadaha kulul: Boorsada Laptop-ka, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka